Mitady tonia mpitantana ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2018 11:29 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary nalaina tamin'ny 25 Janoary 2015 tamin'ny Fihaonamben'ny Global Voices 2015 tao Cebu, Filipina. Lahatsary avy amin'ny Global Voices sy PR Works.
Mitady tonia mpitantana famoahan-dahatsoratra mba hitarika sy hanara-maso ny asan'ny famoahan-dahatsorany ny Global Voices.
Mitady kandidà za-draharaha amin'ny sehatry ny asa famoahan-dahatsoratra marokolontsaina, mamolavola ireo vokatra ara-matoandahatsoratra, mitantana ekipa misandrahaka manerantany, sy ny famatsiam-bola izahay.
Ny Global Voices dia fikambanana iray manerantany, virtoaly tohanan'ny ezak'ireo mpiasa sy mpirotsaka an-tsitrapo ahitana ireo olona any amin'ny kaontinanta rehetra. Ny milina ao amin'ny efitra fanaovan-gazety ny Global Voices dia ekipa tonian-dahatsoratra miasa ampaham-potoana izay miara-miasa amin'ireo mpanoratra an-tsitrapo manerana izao tontolo izao ary manasongadina tantara sy fomba fijery izay tsy dia hita any amin'ny media mahazatra iraisampirenena. Ny tonia mpitantana dia hiara-hiasa amin'ity vondrona ity, miaraka amin'ireo tonian'ny tetikasa manokana sy ireo tonia hafa maro, mba hampivelatra sy hitarika ny vina sy ny zotran-dahatsoratra ary ny vokatra Global Voices. Ao anatin'ny ekipam-pitarihana fototra ao amin'ny Global Voices ihany koa ny tonia mpitantana.
Ao anatin'ny dingan'ny fakana sary an-tsaina ny zotra andehanan'ny fikambanana amin'ny alalan'ny fakàn-kevitra amin'ny vondrom-piarahamonina indray ny Global Voices. Ho afaka hanampy amin'ny fitarihana ny efitrano fanaovan-gazety mandritra ny fotoana tetezamita ny kandidà idealy, mitantana ny fanovana an-dalam-panatanterahana, manohana ny anjara andraikitry ny famoahan-dahatsoratra samihafa sy manampy amin'ny famolavolàna, famatsiam-bola ary ny fitantanana vokatra fizotran-dahatsoratra vaovao.
Mba hiasana am-pahombiazana miaraka amin'ny vondrom-piarahamoninay sy ao amin'ny efitranom-baovao, ny kandidà idealy dia tsy maintsy mahafehy ny teny Anglisy sy farafaharatsiny fiteny iray hafa, ary manana 5-7 taona nizàran-draharaha tamin'ireto sehatra manaraka ireto:
Matihanina amin'ny famoahan-dahatsoratra, fanoratana sy ny fitenenana imasom-bahoaka (amin'ny teny Anglisy)
Mamolavola sy mitantana vokatra sy tetikasa media
Miara-miasa amin'ny tetikasa tarihan'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera na media eny ifotony
Miasa amin'ny tontolo maroendrika sy marokolontsaina, sy miasa miaraka amin'ireo mpanoratra sy mpamokatra media samy manana ny traikefany
Monina na miasa amin'ny firenena maro samihafa, tsara kokoa raha aty amin'ny ilabolantany atsimo
Ny kandidà mendrika dia tokony manana fahaizana amin'ireo sehatra manaraka ireto:
Fanangonam-bola ho an'ireo tetikasa media
Famahanam-Bilaogy, media sosialy, sy fitaovana ampiasaina hiarovana ny zo hiteny ao amin'ny aterineto
Fifandraisana sy fanamoràna amin'ny sehatra marokolontsaina
Miasa mahaleotena, ao anatin'ny ekipa misandrahaka
Kaopy amin'ireo hery mitarika fanovana amin'ny resaka antserasera, media, sy fanehoan-kevitra
Manandrana hevi-baovao sy manangana karazana tantara sy vokatra media vaovao
Ny mpirotsaka hofidiana rehetra dia tokony mahavita mampiseho fanolorantena matanjaka amin'ny asa sy ny soatoavin'ny Global Voices.
Tsy misy fepetra ara-jeografika mifandraika amin'ity toerana ity; Tsy manana birao na foibe hita vatana ny Global Voices.
Ireo mpifaninana dia tsy maintsy manana fidirana aterineto haingam-pandeha sy azo antoka, mahay miasa tsara amin'ny tontolo virtoaly, ary vonona hanao fitsidihana firenena in-dimy isa-taona. Ny Tonia Mpitantana dia hanao tatitra amin'ny Tale Mpanatanteraka sy ny Tale Mpitantana ny Global Voices.
Mandrisika indrindra ireo kandidà avy any ivelan'i Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana izahay ary mandrisika ny olona mandray anjara ankehitriny amin'ny tetikasa Global Voices mba hifaninana.
Mety ho fotoana feno na fotoana feno tanteraka ny asa, saingy tokony horaisina ho toy ny fifanarahana mahaleotena.
Raha hifaninana, mandefasa CV sy taratasy manazava ny antony fa ianao no sahaza ny asa ao amin'ny jobs AT globalvoices DOT org hatramin'ny 15 Septambra 2018.[Amin'ny teny anglisy mazava ho azy]